YePambaPod mini ongororo: diki asi anodheerera | IPhone nhau
YePambaPod Mini ongororo: diki asi anodheerera
Luis Padilla | | HomePod, dzakawanda
Apple yakaburitsa yakamirirwa kwenguva refu HomePod mini, iyo yakadzikiswa vhezheni yepakutanga HomePod iyo inoshamisika nekuita kwayo uye isina kunaka ruzha mhando yemutauri wehukuru hwayo nemutengo. Isu tinozviidza uye tinokuudza nezvazvo.
1 Kugadzirisa dambudziko rePambaPod
2 Dhizaini uye Magadzirirwo
3 Kuteerera kumimhanzi
4 HomeKit pane HomePod mini
5 Virtual mubatsiri
6 Inoshamisa ruzha mhando
7 Bheji hombe kubva kuApple
Kugadzirisa dambudziko rePambaPod
Yakatangwa makore anoda kusvika matatu apfuura, iyo HomePod mutauri uyo kubva pakutanga anga achiyemurwa nehunhu hwayo, asi zvakare akashoropodzwa pamutengo wayo. Yakasvika kuSpain rinenge gore gare gare ku € 349, mutengo wakazoderedzwa kuva € 329, wakaiisa munzvimbo yepamusoro-yekupedzisira yevatauri. Uku kupatsanurwa kwanga kusinga fanirwe, nekuti iro ruzha hunosimbisa, asi mutengo wayo wakaisiya kunze kwemusika kune vashandisi vazhinji, uye saka ndokusiya Apple kunze kwenyika yematauri akachenjera sezvo pakanga pasina imwe nzira. Ruzha rukuru, pakati peKeKKit, yakasanganiswa yemubatsiri, nezvose zvakanakira nekuipira kwaSiri, kusangana kwakakwana muApple ecosystem… asi nemutengo wakakwira.
Yakave nguva yakareba, Siri yakagadziridzwa uye Apple yakavhura iyo HomePod kune yechitatu-bato kunyorera uye masevhisi, izvo zvaita iyo HomePod chishandiso chinokwezva, asi imwe inodhura imwe nzira yakaonekwa seyakanyanya kudikanwa, uye saka mushure meKushure mwedzi mizhinji yerunyerekupe Apple yakaburitsa yayo HomePod mini. Uyu mutauri mudiki anogadzirisa iwo ese matambudziko kubva kune yekutanga HomePod, nekuti Nekuchengeta ese mashandiro eHomePod yakazara, mutengo wayo wakadzikiswa kusvika pa € ​​99, uye kunyangwe mutsauko wezwi uri pachena (uye unonzwisisika), hunhu hwayo hwakakwirira kupfuura hwevamwe vatauri vakaenzana muhukuru nemutengo.
Apple yakachinja fomu, asi inochengetedza kukosha kwayo. Iyo HomePod mini idiki denderedzwa rakabatidzwa nematanda, akafukidzwa neiyo imwechete jira mesh sehama yake mukuru. Pamusoro tine nzvimbo yekubata iyo inoshanda sekudzora kwepanyama, iine anovhenekera maLED anoratidza akasiyana matunhu (kutamba, kufona, Siri, nezvimwewo). Mukati mune mumwe akazara-akazara mushanduri ane maviri mapasita ma radiator, Yakasiyana kwazvo neyekutanga HomePod, pamwe nemaikorofoni mana kutora izwi redu. Iyo S5 processor (yakafanana neiyo yeApple Watch Series 5) ine basa rekuongorora ruzha ka180 pasekondi kuti igare ichitipa ruzha rwakanakisa.
Kubatana kwayo iWiFi (2,4 ne5GHz), uye kunyangwe iine Bluetooth 5.0 haigone kushandiswa kutumira ruzha, asi panenge pasina munhu anoyeuka izvi zvakare, chimwe chinhu chakashoropodzwa mumhando yekutanga. Ruzha rwemhando uye mikana inopihwa neWiFi neApple's AirPlay 2 protocol makore akareruka kure nezvatingaite kuburikidza neBluetooth, uye kana tikazomboda kushandisa HomePod isina internet, tinogona kuzviita pasina chinorova. Iyo zvakare inosanganisira iyo U1 chip yatinozoburitsa pachena kuti ndeyei, uye inoenderana neThread, protocol nyowani ichavandudza kubatana kwemidziyo yekushandisa yemumba yatinayo kumba.
Musimboti wemukurukuri mimhanzi, kunyangwe paine vakurukuri vakangwara basa iri rinogona kuita kunge riri kuramba richisara. Kubva panguva yaunopedza kumisikidza iyo HomePod, iyo inotora maminetsi mashoma, unogona kutanga kunakidzwa nemumhanzi wako. Zvakareruka kana uine Apple Music, hongu, nekuti haudi iPhone yako zvachose. Unogona kukumbira Siri kuti aridze maalbum aunofarira, zvinyorwa zvekutamba, kana zviteshi zvetsika zvichibva pane vaunofarira maartist. Kana iwe ukashandisa kumwe kuburitsa mimhanzi sevhisi, iyo inofadza ndeyekuti Apple yakatovhura iyo HomePod kuitira kuti vagone kubatanidzwa, kunyangwe zvese izvo zvinoenderana nekuti ndeapi masevhisi anoda kuzviita. Chokwadi iwe urikufunga nezveSpotify, iyo yanga ichichema yakatenderedza makona kwemwedzi nekuti haigone kubatanidzwa muPambaPod, saka zvinotarisirwa kuti hazvitore nguva kuti ive inoenderana.
Kana iwe uchida kuteerera kumimhanzi kubva kusevhisi isingawirirane, unogona kuzviita pasina kana padiki dambudziko, asi unofanirwa kuzviita kubva kune yako iPhone, iPad kana Mac uye tumira mimhanzi kuburikidza neAirPlay. Haisi dambudziko rakakomba, asi iwo masanganiswa ekubatanidza ayo Apple Music anayo akarasika. AirPlay 2 zvakare inokutendera iwe kushandisa maspika kubva kumakamuri akasiyana panguva imwe chete (multiroom), uchidzidzora dzese sekunge dzaive chinhu chimwe, nemumhanzi wakanyatsoenderana, kana kutotumira ma audios akasiyana kune yega yega. Iko kune zvakare mukana wekubatanidza maviri epaPodPod minis kuti vagadzire maviri stereo, zvakanyanya kusimbisa iyo yekuteerera ruzivo. Izvo iwe zvausingakwanise kuita kubatanidza HomePod mini nePodPod, hongu. Uye zvakare, izvozvi Apple TV inokutendera iwe kutsanangura odhiyo kuburitsa kuIye HomePod, iyo yakawedzera kuenderana neDolby Atmos inogona kushandura yako mbiri HomePod mini kuita mhinduro yakanakisa kurira kweterevhizheni yako, isingasviki € 200.
Apple yakavandudza pane chimwe chinhu icho ichangobva kuwedzera kune yekutanga HomePod: kuendesa odhiyo kubva ku iPhone. Nekuunza iyo iPhone kumusoro kwePambaPod, odhiyo iwe yauri kuteerera pane yako smartphone ichaendeswa kune mutauri, pasina kuita chero chinhu. Ndiyo nzira yazviri muzvidzidzo, uye kana ichishanda mashiripiti, asi mukuita zvinokundikana zvakanyanya. Iyo HomePod mini inosanganisira iyo U1 chip, sezvinoita iyo iPhone 11 uye gare gare mamodheru. Nekuda kweizvi, iko kuchinjisa kunopedzisira kwave chokwadi 99,99% yenguvaIngo tora kumusoro kweiyo iPhone padhuze nepamusoro pePambaPod mini, uye odhiyo ichaenda kubva ku iPhone kuenda kuImba Podhi kana zvinopesana pasina nguva.
HomeKit pane HomePod mini
Rimwe remabasa eHomePod iyo isina chekuita nemimhanzi iri yekuwana hub yekushandisa yeKeKKit. Izvi ndozvazvinoita nePambaPod mini futi, muchokwadi ndiyo yakachipa pashiri yekushandisa iyo iwe yaunogona kutenga izvozvi, uye zvinoshamisa Iyo zvakare yakanyanya kudzora unit yaunogona kutenga izvozvi. Apple yakawedzera rutsigiro rweiyo Thread protocol yekuvandudza kubatana kweKiKit accessories, kuti iwe ugone kukanganwa nezvemabhiriji uye vanodzokorora kugadzirisa nyaya dzekuvhara.
YePambaPod Mini uye Thread kubatanidza: kanganwa nezve vanodzokorora uye mabhiriji
Kudzora HomeKit kuburikidza nePambaPod isimba guru raSiri. Maitiro ekumisikidza Apple haakurirwe nemakwikwiSezvazviri chokwadi chekuti iwe unotenga iyo yaunotenga, kana iine HomeKit chitupa ichashanda hongu kana hongu, uye nenzira imwecheteyo seimwe mhando, chimwe chinhu (kwandiri) idambudziko hombe kuAmazon neA Alexa. Iko hakuna hunyanzvi pano, haufanire kumirira iye anovandudza kuti atange iyo Spanish vhezheni, hapana zvinoshamisa. Kana chigadzirwa chiine "HomeKit" chisimbiso, zvinongoshanda. Uye Siri mukutonga kweimba yako otomatiki inozadzisa zvakakwana. Tinogona kukakavara pamusoro pekuti ndeupi mubatsiri wepamberi, iye anotaurira majee akanakisa kana uya waunotamba naye mitambo yakanakisa, asi kana zvasvika kumba kwekushandisa… hapana ruvara.
Siri zvakare ine anobatsira mabasa, uye pano inoitawo basa rayo nemazvo, kana iwe uine iPhone, hongu. Uchishandisa Apple masevhisi otomatiki anoita kuti Siri ive nekendari yako, zvinyorwa, zviyeuchidzo, vanofambidzana, nezvimwe.. Uchakwanisa kufona, kuvapindura, kutumira mameseji, kuziva mamiriro ekunze kuenda, gadzira yako yekutenga zvinyorwa ... Zvese izvi mabasa izvo pakutanga iwe zvausingatore mukana nazvo paPambaPod, kusvika imwe zuva raunovaedza uye unonzwa kugadzikana kwekushandisa Siri kwazviri. Ehe, isu tinofanirwa kubvuma kuti kana tikabuda mumabasa aya andataura, Siri ari kumashure kwemakwikwi: haugone kuhodha pizza, kana kutenga matikiti kuinema, kana kugona kuodha mafuta ako aunofarira kuAmazon, kana kutamba Zvishoma Kutsvaka. Kana aya mabasa akakosha kwauri, tarisa kunze kweApple, nekuti hauzovawana pano. Asi mushure memakore angangoita matatu ndichishandisa HomePod, uye anopfuura maviri ane akati wandei Amazon Echos pamba (zvishoma uye zvishoma), kushushikana kwangu ne Alexa kwakakura kwazvo kupfuura naSiri, inyaya yemaitiro.
Inoshamisa ruzha mhando
Ino ndiyo nguva yekutaura nezve kurira kwePambaPod mini, simba rayo guru. Kana iwe usina mutauri senge HomePod kana yakafanana kumba, iwe uchazoshamiswa nezwi. Kana iwe uchitova nePodPod uye wajaira kunaka kwayo, zviri pachena kuti kushamisika kunenge kuri kushoma, asi kuchave nekuvepo. Nezve idiki sei, mhando yayo yekurira yakanaka kwazvo. Izvo hazvifananidzwe nePodPod, kunyangwe padyo padyo, asi nesimba, kune nuances, yemabhasi ... iyi HomePod mini haizokuodza moyo. Kunyangwe iine vhoriyamu iri pa100%, iyo Siri pachayo yainoraira pamusoro payo paunobvunza, hapana zvinokanganisa, "hapana peta" sekutaura kwemwanakomana wangu. Ehe pane iro vhoriyamu haugone kubata, kana muvakidzani wako. Simba remutauri uyu rakakura, mabass akakosha uye kunyangwe iwe usingaone kuti "kuwanda kwema nuances" eHomePod, unokwanisa kusiyanisa mazwi, zviridzwa zvakanaka ... kunyangwe isu tisingafanire kurasikirwa saizi yavo uye zvavasingakwanisi kuona.
Bheji hombe kubva kuApple
Apple imwe chete iyo inobvisa charger kubva ku iPhone yakakosha kudarika € 1000 inokwanisa kuvhura mutauri wehunhu uhwu kwe € 99 chete, uye inosanganisira charger mubhokisi. Ndiwo makakatanwa echinyakare ayo kambani iyi yatijairira, uye ayo anoratidza kuti kubheja kwaakagadzira neiyi HomePod mini kwakakura, ichiita imwe yezvigadzirwa neyakanakisa kukosha kwemari mukatalog yese yekambani, kunyangwe yemusika taigona kusvika patinotaura. Kana iwe uri mushandisi we iPhone, kana iwe uchida kutanga neotomotation yemumba, kana kana iwe uchingofarira mhando yekurira mune mutauri, iyi HomePod mini yakaoma kwazvo kuramba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » YePambaPod Mini ongororo: diki asi anodheerera
Apple inoshandura iOS 14.2 neshanduro inowedzera shanduko kune avo vasina kugadzirisa
Iyo app yeGmail inogamuchira widgets